Cyanogen echiche iwere uzo ozo: mmepe nke ngwa | Gam akporosis
Mgbe ekwuputara Cyanogen Inc., anyị niile bụ juru ọhụrụ ụzọ nke ahụ were ụfọdụ n'ime ihe ndị mejupụtara CyanogenMod iji gaa na ịmepụta smartphones. Ha malitere n'ụkwụ aka nri wee rute nkwekọrịta dị mma iji nwee ụdị pụrụ iche nke CM's OnePlus, nke bara uru ọtụtụ ndị na-eso ụzọ CyanogenMod dabere na ROM ahụ pụrụ iche, mana ọ dị ka ihe niile ọ na-aga nke ọma n'oge na-adịbeghị anya.
Akụkọ akụkọ ọjọọ anaghị amasị anyị na ndị ọzọ gbasara otu ndị mmepe na ihe ndị mejupụtara ya bụ akụkụ nke ihe ịga nke ọma nke gam akporo na CyanogenMod nke kwadoro na omenala ROM mgbe akwa nke ndị nrụpụta nyere ntakịrị ihe mgbu. Ihe na - eme bụ na mgbe ị malitere onwe gị dị ka ụlọ ọrụ nke gị, ị ga - ahụ onwe gị na eziokwu dị njọ nke ịnọ na oge siri ike n'ahịa. Ma ugbu a anyị maara na Cyanogen Inc na-ebelata ndị ọrụ yana echiche ya bụ ilekwasị anya na mmepe ngwa.
Asịrị na-abịa na-ekwu okwu ahụ 20% nke ndị ọrụ emeela ka a mara gị maka ịhapụ ụlọ ọrụ. Enwere nkwenye ma anyị na-eche asịrị, mana enwere ọtụtụ isi mmalite na ụlọ ọrụ ahụ na-eme mgbanwe ụfọdụ na ntuziaka ya na ntuziaka ọ ga-ewere.
N'etiti mgbanwe ndị ahụ ga-abụ mmepe nke ngwa, ihe nke e mikpuru n’ime ya ruo ogologo oge ma marakwa ihe nile ọ ma etu esi eme nke ọma. Ka o sina dị, ihe ekwuru, anyị ga-ahụ otu o si ewe ụzọ ọhụrụ ahụ ma ọ bụrụ na anyị ziri ezi banyere mmalite nke anyị maara otu afọ gara aga na ga-esonyere Microsoft.
Ugbu a Olileanya na ihe niile na-aga nke ọma na ụzọ ahụ o mere, ọbụlagodi na ọ hụla ihe mgbochi ụfọdụ na ya, ọ nwere ike imeri ha ma chọta ebumnobi doro anya ebe ọ ga-aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Cyanogen Inc. na-ebelata ndị ọrụ mgbe ha na-elekwasị anya na mmepe ngwa
Ntughari ohuru nke Nexus Sailfish tinyere ya na 5,2 "na ihuenyo na Snapdragon 820 chip
Google Maps na-eji ụdị Wi-Fi naanị na ọkwa ọhụụ maka ọhaneze